Semalt: Google विश्लेषकबाट बोट ट्राफिक कसरी हटाउने
के तपाईंले आफ्नो साइटमा हस्तक्षेप गर्ने बोटहरूको संख्या द्रुत रूपमा बढिरहेको याद गर्नुभयो? यदि तपाईंको उत्तर "हो" हो भने, Semalt को ग्राहक सफलता प्रबन्धक, म्याक्स बेलले तपाईंलाई यो समस्याको सामना गर्न मद्दत गर्दछ! कुनै पनि वेब प्लेटफर्मको रूपमा, गुगल एनालिटिक्स स्प्याम र बोट गतिविधि गर्न शक्तिहीन छ, जसले व्यावहारिक रूपमा हरेक साइटलाई प्रभाव पार्छ। वास्तवमा, यो एक मुद्दा हो जुन अनलाइन विज्ञापनदाताहरूको लागि वास्तविक टाउको दुख्दैछ।
Bot यातायात के हो?
गुगल एनालिटिक्समा, शब्द "बोट गतिविधि" खराब साइट्स र रोबोटको हमला अन्तर्गत साइट वर्णन गर्न प्रयोग गरीन्छ। एक वेबसाइट मा यस्तो गतिविधि दुर्भावनापूर्ण गतिविधि, यसको समग्र प्रदर्शन उल्लेखनीय कम गर्न र यसको सामग्री लाई असर गर्न सक्दछ।
गुगल एनालिटिक्समा बोट गतिविधि कसरी छुट्याउने?
यहाँ Google एनालिटिक्समा बोट गतिविधि स्पट गर्नका लागि एक चरण निर्देशनहरू छन्।
बायाँ तिरको सेक्सनमा राखिएको अधिग्रहणमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यस बिन्दुमा च्यानलहरू र सबै ट्राफिकमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसोभए रिपोर्टको डिफल्ट च्यानल कोटि सेक्सनमा जानुहोस् र रेफरल क्लिक गर्नुहोस्।
के तपाइँ तपाइँको रेफरल स्रोत को बहुमत थाहा छ? यदि तपाईंको उत्तर होईन, र ती तपाईंको उद्यमको लागि महत्वपूर्ण नदेखिए भने, यो जानकारीको प्राथमिक अंश हुन सक्दछ यो दर्साउन कि यो बोट ट्राफिक हो। पृष्ठको तल "रेफ्र्सका प show्क्तिहरू" क्लिक गर्नुहोस् रेफरलहरूको पूर्ण rundown प्राप्त गर्नका लागि।
तपाईंले माथिको नियममा दर्साईएको निर्देशनहरू अनुसरण गर्दै तपाईंको स्प्याम ट्र्याक गर्नुपर्दछ, अझै तपाईंलाई तपाईंलाई प्रख्यात स्प्यामरहरूबारे अझ बढी परिचित गराउनको लागि हामी तपाईंको लागि केही केसहरू भेला गरेका छौं:
गुगल एनालिटिक्समा बोट गतिविधि कसरी बेवास्ता गर्ने?
गुगलले यस मुद्दालाई व्यवस्थित नगरे सम्म त्यहाँ केही विकल्पहरू छन् जुन तपाईंले विचार गर्न सक्नुहुनेछ।
वर्णन गरिएको मुद्दासँग सामना गर्न उत्तम तरिकाहरू मध्ये एक त्यस्तो च्यानलहरू बनाउनु हो जुन तपाईंको बोटलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्दै विशिष्ट बोट वा बोटहरू रोक्दछ।
गुगल एनालाइटिक्समा तपाईं फलो गरिरहनु भएको क्षेत्र र सबडोमेनहरूको पर्याप्त संख्याको एक रौंडाउन बनाउनुहोस्।
अर्को कार्यान्वयन जुन तपाईं कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुनेछ एक्सेल शिटमा सबै इनपुट गर्नुहोस् र तपाईंलाई आवश्यक जानकारी प्राप्त गर्नुहोस्।
अन्तिम तर कम्तिमा विकल्प छैन यो सुनिश्चित गर्नका लागि कि बाट ट्राफिकले तपाईंको गुगल एनालिटिक्स जानकारीलाई असर गरिरहेको छैन। च्यानलहरू जोड्नु यो कार्यान्वयन गर्न उत्तम दृष्टिकोण हो। केवल यी सुझावहरूको पालना गर्नुहोस्, र तपाईंले माथि वर्णन गरिएको समस्या साथ फेरि कहिले सामना गर्नुपर्नेछ!